အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ နှင့် ဟိုလော … သည်လော … (၁) | MoeMaKa Burmese News & Media
မောင်ကျေးရေ ● လူနှင့် ရေ ... ရေနှင့် လူ
သာထက်အောင် ● အတုဝင်္ကပါထဲမှာ
အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ နှင့် ဟိုလော … သည်လော … (၁)
ကျော်ငြိမ်းမိုး၊ ဧပြီ ၁၅၊ ၂၀၁၃
မြန်မာနိုင်ငံသည် ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်သောမြန်မာနိုင်ငံကို ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟု ထပ်တခါပြောလိုက်ရခြင်းမှာ ပြောလောက်ရသည့်အကြောင်းများ ရှိ၍လာသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သည်လို … ။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ လူမျိုးစုံ၊ ဘာသာစုံဖြစ်တဲ့အတွက် အခုလို ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ပြောခြင်း၊ သတ်မှတ်ခြင်းက ဖြစ်သင့်ပါရဲ့လား။ တရားမျှတပါရဲ့လားတဲ့။
မြန်မာနိုငံဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးကို တောင်းဆို၊ ကျင့်သုံးဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် အခုလို မြန်မာနိုင်ငံသည် ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်သည်လို့ တွေးခေါ်ခြင်း၊ ပြောဆိုခြင်း၊ သတ်မှတ်ခြင်းက ဖြစ်သင့်ပါရဲ့လား။ တရားမျှတပါရဲ့လားတဲ့။
နောက်ထပ်ယူလာသေးတာက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ဒီးဒုတ်ဦးဘချိုရဲ့စကားပဲ။ ဆိုလိုတာက မြန်မာနိုင်ငံမှာ မွတ်ဆလင်တွေ၊ ခရစ်ယာန်တွေပါ ပါဝင်နေထိုင်ပြီး၊ လွတ်လပ်ရေးအတွက် အတူတိုက်လာခဲ့ပြီး ခုကျမှ အခုလို ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းပြည်အဖြစ်ပြုလုပ်လိုက်ခြင်းဟာ၊ ဖြစ်သင့်ပါရဲ့လား။ တရားမျှတပါရဲ့လား။ “နိုင်ငံရေးက နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေးက ဘာသာရေး သက်သက်လုပ်စမ်းပါ ဆရာရယ် … ” ဆိုတဲ့စကား …
တွေ့ ရှိချက်ကိုပြောမယ်နော် … ။
တရားဝင်စစ်တမ်းတွေအရ ကမ္ဘာ့လူဦးရေးရဲ့၃၃% (၂ ဘီလျံ)က ခရစ်ယာန်၊ ၁၈% (၁.၃ ဘီလျံ)က အစ္စလမ်၊ ဟိန္ဒူက ၁၆% (၉၀၀ မီလျံ)၊ ဘာသာမဲ့က ၁၆% (၈၅၀ မီလျံ)၊ ပြီးတော့မှ ဗုဒ္ဓဘာသာက ၆% (၃၆၀ မီလျံ)လို့ တွေ့ ရှိရတယ်။ (buddhist studies: statistics on buddhists, 2008)
ကိုးကွယ်သူဦးရေအများဆုံးဖြစ်တဲ့ ခရစ်ယန်နိုင်ငံတွေအများစုဟာ၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စစ်ရေး၊ နည်းပညာ၊ စက်မှုနဲ့ အတွေးအခေါ်မြော်မြင်မှုပိုင်းမှာ တိုးတက်ပြီး၊ ရှေးရောက်ပြီး ဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမှာ ဖြစ်သလို၊ အဲ့ဒီနိုင်ငံများဟာ ၂၁ရာစုမှာ ဂုဏ်ယူစွာကြွေးကြော်လေ့ရှိတာတခုက သူတို့ရဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ OPEN SOCIETY (ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း)၊ DIVERSITY လူမျိုးစုံ၊ ဘာသာစုံ၊ အတန်းအလွှာ၊ အယူဝါဒစုံ နေထိုင်နိုင်တဲ့၊ လွတ်လပ်ပြီး လူ့ အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေတဲ့။
အဲဒီလို တိုးတက်ပြီး DIVERSITY ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေများမှာတောင် သူတို့ရဲ့တရားဝင်ဘာသာတရားဟာ ခရစ်ယာန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ အငြင်းမပွားကြဘူး။ နိုင်ငံတော်အခမ်းအနားတွေ၊ နိုင်ငံရဲ့အားလပ်ရက် သတ်မှတ်မှုတွေ၊ နိုင်ငံရဲ့ဓလေ့ထုံးတမ်း အစဉ်အလာတွေ၊ ယဉ်ကျေးမှုတွေ၊ သီချင်းတွေကအစ ခရစ်ယာန် ဘာသာတရားကို အခြေခံထားကြပြီး၊ ခရစ်ယာန်အယူဝါဒကို ရောင်ပြန်ဟပ်၊ ကိုယ်စားပြုထားတာတွေ့ ရမယ်။
ဘာကြောင့်လဲ။ သူတို့ကလူများစုလေ။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေက အဲဒီနိုင်ငံများမှာလူများစုဖြစ်ပြီး၊ သူတို့ရဲ့ချွေးတွေ၊ သွေးတွေ၊ ယုံကြည်မှုတွေနဲ့ သူတို့နိုင်ငံကို တည်ဆောက်ထားကြတာလေ။ သူတို့ ကိုးကွယ်ရာဖြစ်တဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို တရားဝင် နိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ် တိုက်ရိုက်သတ်မှတ်ပြီးလို့ပဲ ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်လို့ပဲဖြစ်စေ ကျင့်သုံးတာ တရားမျှတမှုရှိရဲ့လား၊ ဖြစ်သင့်ရဲ့လားလို့မေးခွန်းထုတ်တာဟာ ထုတ်တဲ့သူအနေနဲ့ ကြောင်းကျိုးညီညွတ်ရဲ့လား၊ မျှတပါရဲ့လားလို့ ပြန်မေးစရာရှိလာတယ်။
ကမ္ဘာမှာ အင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ၂၁ရာစု လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီရဲ့ပြယုဂ်ကြီး၊ ဘာသာရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးကို သီးခြားထားရှိရေး (Speration of Church and State) အယူအဆရှေ့ ဆောင်ကြီးကိုပဲကြည့်ပေါ့။ သူ့ ဖွဲ့ စည်းပုံဥပဒေရဲ့ ကျောရိုးဖြစ်တဲ့ လွတ်လပ်ရေးကြေငြာစာတမ်းမှာ လူသားတို့ရဲ့တန်းတူမှုနဲ့အခွင့်အရေး တွေကို ဖန်းဆင်ရှင် (ဘုရားသခင်) က ပေးအပ်ထားတယ်ဆိုတာကို အတိအကျထည့်သွင်းထားတာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်တယ်။ (Documents from the Continental Congress and the Constitutional Convention, 1774-1789, n.d.) သမ္မတအသစ်တက်လို့ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုရင် တရားသူကြီးချုပ်ရဲ့တိုင်ပေးမှုနဲ့အတူ၊ အမေရိကန် ဖွဲ့စည်းပုံကို အသက်ပေးကာကွယ်မှာဖြစ်ကြောင်း၊ ဘုရားသခင်ကူညီပါဆိုတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်သည်။ တရားဝင်နိုင်ငံသုံးငွေ ဒေါ်လာမှာ (IN GOD WE TRUST) ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ပါ၏ဆိုတဲ့ စာသားလေးကို ထည့်သွင်းထားတာလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်သည်။ အမေရိကန်မှာ လူမျိုးစုံ၊ ဘာသာစုံနေတာပဲ။ ဘယ်သူမှဘာမှ မတရားမပြောပါဘူး။ အမေရိကန်ဆိုရင် ခရစ်ယာန်နိုင်ငံလို့ ပဲသိကြတယ် မဟုတ်လား။
သို့ဆိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံလို နိုင်ငံမျိုးကျမှ၊ ထိုကဲ့သို့ဝေဖန်မှုမျိုး၊ ငြင်းခုံမှုမျိုး အဘယ့်ကြောင့် ဖြစ်လာခဲ့ရ သနည်း။ နူရာဝဲစွဲ၊ လဲရာသူခိုးထောင်း။ မုဆိုးမသွားရာမိုးလိုက်လို့ ရွာဆိုတဲ့သဘောလား။
မြန်မာနိုင်ငံကို ဗုဒ္ဓသာသနာရောက်ရှိတာ ဘုရားလက်ထက် ကုန်သည် (၂)ဦးကစလို့ အနော်ရထာမင်း တိုင်တဲ့အထိ (၅)ကြိမ်တိုင်ရှိခဲ့တယ်လို့ အထောက်အထားတွေကဆိုသည်။ အနော်ရထာမင်း အေဒီ(၁ဝ၄၄)က စလို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မင်းအဆက်ဆက်၊ နယ်စားမြို့စားအဆက်ဆက်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတော် အဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့ကြတယ်။ သာသနာဖြန့်ဖြူးခဲ့ကြတာကို မြန်မာလိုရော၊ အင်္ဂလိပ်လိုပါရေးထားတဲ့ ကျမ်းကြီး ကျမ်းခိုင်တွေအပြင်၊ ဂူးဂဲလ်ပြီး၊ ဝီကီခြင်းနဲ့ လည်း အလွယ်တကူ သိနိုင်သည်။ အထင်အရှားဖြစ်သည်။
ပုဂံ၊ အင်းဝ၊ စစ်ကိုင်း၊ တောင်ငူ၊ ဟံသာဝတီ၊ မုတ္တမ မြန်မာနိုင်ငံ တနံတလျား ကြိုက်တဲ့နေရာကို သွားပါ။ စေတီ၊ ပုထိုး၊ ဘုရားကျောင်းကန်တွေ လက်ညှိုးထိုးမလွဲ။
ယေဘုယျအချက်အလက်အဖြစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူဦးရေ ၅၅သန်းမှာ ၈၉.၂% က ဗုဒ္ဓဘာသာ။ ၅.၀၅% က ခရစ်ယာန်။ အစ္စလမ်က ၃.၇၈% လို့ အထောက်အထားတွေကဆိုသည်။
၂၀၀၈ခုနှစ်အထိ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းပေါင်း (၅၆၈၃၉)၊ သံဃာဦးရေ၊ ကိုရင် အပါအဝင် (၅၄၆၀၀၀)၊ မယ်သီလရှင်ဦးရေ (၄၃၃၀၀)ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးကို ကျေးရွာမှတဆင့် အဏာပိုင်အဖွဲ့ အုပ်ချုပ်သူအဆင့်အထိထိကို ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းများမှာသာပြဋ္ဌာန်း၍၊ သင်ကြားခြင်း ပြုသောစနစ်ကို အင်္ဂလိပ်တို့ မြန်မာတပြည်လုံး မသိမ်းပိုက်ခင်အထိ ကျင့်သုံးခဲ့ကြသည်။ စနစ်တကျ ဖိနှိပ်ကွပ်ကဲထားသော ကိုလိုနီနယ်ချဲ့များကို၊ တွန်းလှန်ဆန့်ကျင်ဖို့ အမျိုးသားရေးစိတ်၊ နိုင်ငံရေးနိုးကြားစိတ် များကို ဗုဒ္ဓဘာသာကို အခြေပြု၍ ဗုဒ္ဓဘာသာလှုပ်ရှားမှုများက စတင်ခဲ့ကြသည်။ ယနေ့အချိန်အထိ မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်အားအကြီးဆုံးနဲ့ တောင့်တင်းအခိုင်မာဆုံးဖြစ်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော်ကို ယှဉ်ပြိုင်အံတု နိုင်သည့်၊ တခုတည်းသော စနစ်တကျဖွဲ့ စည်းထားသည့် အင်အားအရှိဆုံး အဖွဲ့အစည်း (Single Institution) မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ သံဃာအဖွဲ့ အစည်းပင်ဖြစ်သည်။ (Steinberg, 2010)။
အမေရိကန်နိုင်ငံ စတင်မတည်ထောင်မီ၊ လူအခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းကြီးမရေးသားမထုတ်ဝေခင်၊ ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ထောင်ချီကတည်းက သမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာ အထောက်အထား အခိုင်အလုံများနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ အပြင်၊ လူဦးရေကပါ အများစုဖြစ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနေထိုင်တဲ့တိုင်းပြည်ကို ဗုဒ္ဓဘာနိုင်ငံဖြစ်သည်လို့ သတ်မှတ်တာ၊ ပြောတာကတော့ အတွေးအခေါ်အရလည်းမမှားသလို၊ အချက်အလက်အရလည်းမမှားဘူး ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေးဆိုတာ လူတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးအရေးအရာတွေကို ဖြေရှင်းတဲ့အရေးအရာတွေအပြင်၊ ပထဝီ ဒေသတခုမှာနေထိုင်တဲ့ လူတွေရဲ့ တန်ဖိုး၊ ကိုးကွယ်ရာ၊ ယုံကြည်မှု၊ အယူဝါဒတွေနဲ့ စံတွေကိုပါဖြေရှင်းရတဲ့၊ တည်ဆောက်ရတဲ့၊ ကာကွယ်ရတဲ့၊ တိုးတက်အောင်လုပ်ရတဲ့ အရာတခု မဟုတ်ပေဘူးလား … ။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်၍ အခြားဘာသာတွေကို မလေးစား ရတော့ဘူးလား၊ မစောင့်ရှောက်ရတော့ဘူးလား ဆိုသည့် တွေးခေါ်မှုက တသီးတခြားစီပဲဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်သည့်အတွက် အခြားဘာသာတွေ အတွက် လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့် မရှိတော့ဘူးလားဆိုတာက တသီးတခြားစဉ်းစားရမှာဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်သည့်အတွက် နိုင်ငံတော်ရဲ့ အခွန်တော်ငွေကို၊ မည်သို့မည်ပုံ တရားမျှတစွာ သုံးစွဲရမလဲဆိုသည်က သီးသန့်ဆွေးနွေးရမည့် အကြောင်း အရာဖြစ်ပါသည်။
အိုးများ ဘောင်ဘင်ခတ်ရင် ရေဖိတ်စင်ရုံပဲရှိမည်။
သို့သော် … အတွေးအခေါ်၊ သဘောတရားဘောင်ဘင်ခတ်ရင် အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ပျက်ပေတော့မည်။
buddhist studies: statistics on buddhists. (2008). Retrieved from buddhanet: http://www.buddhanet.net/e-learning/history/bud_statwrld.htm
Documents from the Continental Congress and the Constitutional Convention, 1774-1789. (n.d.). Retrieved from The Library of Congress: http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/r?ammem/bdsdcc:@field(DOCID+@lit(bdsdcc02101))
Steinberg, D. I. (2010). Burma/Myanmar (What Everyone Needs to Know). New York: Oxford University Press, Inc.
3 Responses to အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ နှင့် ဟိုလော … သည်လော … (၁)
Think about it carefully on April 15, 2013 at 8:20 pm
I totally agree with author. They are different issues and we should treat these differently. I hope every one know what they have done and they are trying to do.
Be vigilance and Don’t violence.
Maung Myanmar on April 16, 2013 at 3:54 am
Esther on April 16, 2013 at 1:46 pm